ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နားလည်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သိလာဖို့ ဘာတွေကို ပြင်ဆင်ရမလဲ? – For her myanmar
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နားလည်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သိလာဖို့ ဘာတွေကို ပြင်ဆင်ရမလဲ?
Posted on January 7, 2019 January 9, 2019 Author Wynee Myanmar	Comment(0)
လူတချို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်၊ ဘာတွေကို သူတို့တွေ အောင်မြင်အောင် လုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ မသိဘဲ ဘဝကို ဖြတ်သန်းသွားကြပါတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ကောင်းကောင်းနားလည်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုပြီးကောင်းမွန်အောင်စီမံခန့်ခွဲဖို့နဲ့ လူအများနဲ့ အဆင်ပြေပြေဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ “ခံစားချက်တစ်ခုကို ဖြစ်ပျက်တဲ့အတိုင်း သိမြင်တာ၊ တစ်နည်းပြောရရင် မိမိကိုယ်ကို သိတာက စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အသိဉာဏ်အတွက် အဓိကအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်” လို့ Emotional Intelligence (စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအသိဥာဏ်) ထဲမှာ Daniel Goleman က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်က ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်တွေ၊ အကျင့်တွေ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ အပြုအမူတွေနဲ့ ကိုယ် တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေဟာ ဘာတွေဖြစ်မလဲလို့ ပြည့်ပြည့်ဝဝ သိရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအရာတွေက ကိုယ့်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ဘယ်လိုတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုလည်း နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများက ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ကောင်းကောင်းသိတယ်လို့ ယူဆတတ်ကြပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သေချာသိနိုင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရိုးသားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ဒီနည်းလမ်းတွေကိုတော့ ယောင်းတို့အတွက် Wynee က အက်ဒ်မင်တို့ကနေတစ်ဆင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
အားသာချက်တွေနဲ့ အားနည်းချက်တွေ အပါအဝင် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ဖော်ညွှန်းပြသနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေ၊ စကားစုတွေကို စာရင်းပြုစုကြည့်ပါ။ မြန်မြန်လုပ်ကြည့်ပြီး ဘေးမှာချထားလိုက်ပါ။ ရက်အနည်းငယ် ကြာတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီစာရင်းထဲက ကိုယ့်ရဲ့စရိုက်တွေကို ဖျက်ချင်တာဖျက်၊ ထပ်ထည့်ချင်တာ ထပ်ထည့်ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ ဥပမာ-မိဘ၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (ကိုယ်နဲ့ သက်တူရွယ်တူတွေနဲ့ အထက်လူကြီး နှစ်မျိုးလုံးဆို ပိုကောင်းပါတယ်) တွေထဲက (၃)ယောက်စီနဲ့ အနည်းဆုံး လူ ၉ ယောက်ကိုလည်း အလားတူလုပ်ခိုင်းကြည့်ပါ။ ဘယ်အရာတွေက ထပ်နေလဲ၊ ဘယ်အရာတွေက ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကွက်တွေလဲ၊ ဆိုးကွက်ေတွလဲဆိုတာ သိရအောင် သူတို့ရဲ့ စာရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စာရင်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
(က) ကိုယ့်စာရင်းထဲမှာပါနေပြီး တခြားသူတွေဖော်ပြထားတဲ့ အလားတူတဲ့ စရိုက်တွေ ဆိုတဲ့ စာရင်းနဲ့
(ခ) ကိုယ့်စာရင်းထဲမှာမပါတဲ့ တခြားသူတွေဖော်ပြထားတဲ့ စရိုက်တွေဆိုတဲ့ စာရင်းပါ။
ပထမတစ်ခုက ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ် သိနေတယ်ဆိုတာရဲ့ အတည်ပြုချက်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ခုမှာတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ် မသိတဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် လက်မခံချင်တဲ့ ဝေဝါးနေတဲ့အချက်တွေ ပါဝင်နိုင် ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူပေါ် တခြားသူတွေရှုမြင်ပုံကို အခြေခံထားတဲ့အတွက် အဲဒီရှုမြင်ချက်တွေအားလုံးကို ဆီလျော်မှုရှိတယ်လို့ လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ငါဘယ်တုန်းက ဘယ်မှာ အဲ့လိုလုပ်ဖူးလို့လဲဆိုတဲ့ ဆင်ခြေတွေကို မေ့ပစ်ပါ။
တစ်ပတ်တာအတွင်းက ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေမှာ ကိုယ်ပြုမူခဲ့တဲ့၊ တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ အရာတွေအပေါ် သုံးသပ်နိုင်ဖို့ စနေ၊တနင်္ဂနွေထဲက တစ်ရက်ရက်မှာ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ပိုင်အချိန်ရှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်မှာ ပြဿနာဖြစ်တဲ့နေ့တို့၊ ဒါမှမဟုတ် မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်ရတဲ့နေ့တို့ ရှိနေမယ်ဆိုရင် အဲဒီနေ့ရဲ့ အဆုံးမှာပဲ ဒီသုံးသပ်ချက်ကို လုပ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီပြဿနာတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို အဲဒီနေ့မှာ အမှတ်မိဆုံးပဲလေ.. ကြာသွားခဲ့ရင် မေ့တာက မေ့ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို အမှန်တိုင်း မသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့…
လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ ဖြစ်ရပ်ထဲမှာပါတဲ့ တခြားသူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပြုမူပုံတွေကို အာရုံမစိုက်ပါနဲ့။ ဘယ်အရာတွေက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဘယ်လိုဖြစ်စေလဲ၊ ကိုယ့်ကို ဘယ်လို တုံ့ပြန်စေလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။ စာရင်းနှစ်ခုပေါ်မှာ ပြန်ပြီး သုံးသပ်ပါ။ စာရင်း (က) မှာ ပြုပြင်ဖို့ လိုတာတွေ ရှိမရှိ ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့စရိုက်တွေရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းတွေ ထပ်ထည့်လို့ နေ့စဉ် မှတ်တမ်းရေးပါ။
ဒါက အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နားလည်နိုင်စွမ်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက် သက်ရောက်မှုအရှိဆုံး ခြေလှမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးတွေ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေက ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိသေးခင် အဲဒီစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကို သိနေပါစေ၊ သတိကပ်နိုင်ပါစေ။ ဒါက ရေရှည်လုပ်ရမယ့် အရာတစ်ခုပါ။ ဆိုလိုတာက ယောင်းရယ် ဒေါသထွက်တယ်ဆိုရင် ဘာမှ မပြောမိခင်၊ ဘာမှမလုပ်မိခင် ဒေါသထွက်တယ်၊ ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ပါ။ ကြာလာတဲ့အခါမှာ ဒီနည်းလမ်းက ဒေါသတွေ၊ ပူလောင်မှုတွေ ငြိမ်းစေတယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် လမ်းလျှောက်ရင်း၊ ရေချိုးရင်း၊ စားရင်း စတဲ့နိစ္စဓူဝတာဝန်တွေလုပ်ဆောင်ရင်း ရိုးရိုးလေး သတိထားပြီးအသက်ရှူခြင်း (သတိကပ်ပြီး တရားထိုင်ခြင်း)ကနေ စပြီး လေ့ကျင့်ပါ။ ဒီအလေ့အကျင့်က ပုံမှန်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့သတိရှိမှုက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကို သေသေချာချာ သိသွားစေပြီး ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် နားလည်မှုကလည်း ပိုနက်နဲလာမှာပါ။ တစ်နေ့ ငါးမိနစ် စသဖြင့် နည်းနည်းချင်း စလုပ်ကြည့်ပါ။ သက်သောင့်သက်သာ ပိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ အချိန်တိုးပြီး လုပ်ကြည့်ပါ။
သတိကပ်ပြီး တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ဆရာတွေ ရှိကြပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်က အမြဲတမ်း ရိုးရိုးလေးသတိထားပြီး စူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့ အသက်ရှူမှုကို အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တိုင်းကို အမှန်တကယ် သိရှိပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နက်နက်နဲနဲ နားလည်လာပြီး အသိအမှတ် ပြုလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုပိုမြင့်လာအောင် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက် (၄) ချက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နားလည်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရော၊ လုပ်ငန်းသဘောအရပါ တိုးတက်လာဖို့အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေက ကိုယ့်အကြောင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်တွေနဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ပိုပြီး သိရှိလာဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်း အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
လူတခြို့က သူတို့ကိုယျသူတို့ ဘယျလိုလူမြိုးဖွဈတယျ၊ ဘာတှကေို သူတို့တှေ အောငျမွငျအောငျ လုပျကိုငျနိုငျတယျဆိုတာကို ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ မသိဘဲ ဘဝကို ဖွတျသနျးသှားကွပါတယျ။ ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ ကောငျးကောငျးနားလညျတာက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပိုပွီးကောငျးမှနျအောငျစီမံခနျ့ခှဲဖို့နဲ့ လူအမြားနဲ့ အဆငျပွပွေဆေကျသှယျနိုငျဖို့အတှကျ အခွခေံဖွဈပါတယျ။ “ခံစားခကျြတဈခုကို ဖွဈပကျြတဲ့အတိုငျး သိမွငျတာ၊ တဈနညျးပွောရရငျ မိမိကိုယျကို သိတာက စိတျခံစားမှုဆိုငျရာ အသိဉာဏျအတှကျ အဓိကအုတျမွဈဖွဈတယျ” လို့ Emotional Intelligence (စိတျခံစားမှုဆိုငျရာအသိဉာဏျ) ထဲမှာ Daniel Goleman က ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ကိုယျက ဘယျလိုလူမြိုးဖွဈတယျဆိုတာကို သိဖို့ ကိုယျ့ရဲ့ပငျကိုယျစရိုကျတှေ၊ အကငျြ့တှေ၊ စိတျခံစားမှုတှေ၊ အပွုအမူတှနေဲ့ ကိုယျ တနျဖိုးထားတဲ့အရာတှဟော ဘာတှဖွေဈမလဲလို့ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ သိရှိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဘယျလိုအရာတှကေ ကိုယျ့ရဲ့ တုံ့ပွနျမှုကို ဘယျလိုတှဖွေဈစတေယျဆိုတာကိုလညျး နားလညျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ ကောငျးကောငျးသိတယျလို့ ယူဆတတျကွပမေဲ့ တကယျတမျးတော့ ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ သခြောသိနိုငျဖို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ရိုးသားဖို့လိုတယျဆိုတာကိုတော့ မနေ့တေတျကွပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ? ဒီနညျးလမျးတှကေိုတော့ ယောငျးတို့အတှကျ Wynee က အကျဒျမငျတို့ကနတေဈဆငျ့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော…
အားသာခကျြတှနေဲ့ အားနညျးခကျြတှေ အပါအဝငျ ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ ဖျောညှနျးပွသနိုငျတဲ့စကားလုံးတှေ၊ စကားစုတှကေို စာရငျးပွုစုကွညျ့ပါ။ မွနျမွနျလုပျကွညျ့ပွီး ဘေးမှာခထြားလိုကျပါ။ ရကျအနညျးငယျ ကွာတဲ့အခြိနျမှာ အဲဒီစာရငျးထဲက ကိုယျ့ရဲ့စရိုကျတှကေို ဖကျြခငျြတာဖကျြ၊ ထပျထညျ့ခငျြတာ ထပျထညျ့ပါ။ ပွီးတော့ ကိုယျနဲ့ ပုံမှနျအဆကျအသှယျရှိတဲ့ ဥပမာ-မိဘ၊ သူငယျခငျြးနဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျ (ကိုယျနဲ့ သကျတူရှယျတူတှနေဲ့ အထကျလူကွီး နှဈမြိုးလုံးဆို ပိုကောငျးပါတယျ) တှထေဲက (၃)ယောကျစီနဲ့ အနညျးဆုံး လူ ၉ ယောကျကိုလညျး အလားတူလုပျခိုငျးကွညျ့ပါ။ ဘယျအရာတှကေ ထပျနလေဲ၊ ဘယျအရာတှကေ ကိုယျ့ရဲ့ကောငျးကှကျတှလေဲ၊ ဆိုးကှကျေတှလဲဆိုတာ သိရအောငျ သူတို့ရဲ့ စာရငျးနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့စာရငျးကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ပါ။
(က) ကိုယျ့စာရငျးထဲမှာပါနပွေီး တခွားသူတှဖေျောပွထားတဲ့ အလားတူတဲ့ စရိုကျတှေ ဆိုတဲ့ စာရငျးနဲ့
(ခ) ကိုယျ့စာရငျးထဲမှာမပါတဲ့ တခွားသူတှဖေျောပွထားတဲ့ စရိုကျတှဆေိုတဲ့ စာရငျးပါ။
ပထမတဈခုက ကိုယျ့အကွောငျးကို ကိုယျ သိနတေယျဆိုတာရဲ့ အတညျပွုခကျြဖွဈပွီး ဒုတိယတဈခုမှာတော့ ကိုယျ့အကွောငျးကို ကိုယျ မသိတဲ့၊ ဒါမှမဟုတျ လကျမခံခငျြတဲ့ ဝဝေါးနတေဲ့အခကျြတှေ ပါဝငျနိုငျ ပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အပွုအမူပျေါ တခွားသူတှရှေုမွငျပုံကို အခွခေံထားတဲ့အတှကျ အဲဒီရှုမွငျခကျြတှအေားလုံးကို ဆီလြျောမှုရှိတယျလို့ လကျခံနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။ ငါဘယျတုနျးက ဘယျမှာ အဲ့လိုလုပျဖူးလို့လဲဆိုတဲ့ ဆငျခွတှေကေို မပေ့ဈပါ။
တဈပတျတာအတှငျးက ကိစ်စရပျတှနေဲ့ အဖွဈအပကျြတှမှော ကိုယျပွုမူခဲ့တဲ့၊ တုံ့ပွနျခဲ့တဲ့ အရာတှအေပျေါ သုံးသပျနိုငျဖို့ စနေ၊တနင်ျဂနှထေဲက တဈရကျရကျမှာ ကိုယျ့အတှကျ ကိုယျပိုငျအခြိနျရှာပါ။ ဒါပမေဲ့ အလုပျမှာ ပွဿနာဖွဈတဲ့နတေို့၊ ဒါမှမဟုတျ မှတျမှတျရရ ဖွဈရတဲ့နတေို့ ရှိနမေယျဆိုရငျ အဲဒီနရေဲ့ အဆုံးမှာပဲ ဒီသုံးသပျခကျြကို လုပျပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒီပွဿနာတှနေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြတှကေို အဲဒီနမှေ့ာ အမှတျမိဆုံးပဲလေ.. ကွာသှားခဲ့ရငျ မတေ့ာက မပွေီ့း ကိုယျ့ရဲ့ တုံ့ပွနျမှုတှကေို အမှနျတိုငျး မသိနိုငျတော့ဘူးပေါ့…
လုပျတဲ့အခါမှာလညျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပဲ အာရုံစိုကျပါ။ ဖွဈရပျထဲမှာပါတဲ့ တခွားသူတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ ပွုမူပုံတှကေို အာရုံမစိုကျပါနဲ့။ ဘယျအရာတှကေ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြကို ဘယျလိုဖွဈစလေဲ၊ ကိုယျ့ကို ဘယျလို တုံ့ပွနျစလေဲ ဆိုတာကို စဉျးစားပါ။ စာရငျးနှဈခုပျေါမှာ ပွနျပွီး သုံးသပျပါ။ စာရငျး (က) မှာ ပွုပွငျဖို့ လိုတာတှေ ရှိမရှိ ကွညျ့ပွီး ကိုယျ့ရဲ့စရိုကျတှရေဲ့နောကျကှယျက အကွောငျးရငျးတှေ ထပျထညျ့လို့ နစေ့ဉျ မှတျတမျးရေးပါ။
ဒါက အခကျခဲဆုံးဖွဈပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျနားလညျနိုငျစှမျး၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျမှုနဲ့ ဆကျဆံရေးတှကေို စီမံခနျ့ခှဲနိုငျဖို့အတှကျ သကျရောကျမှုအရှိဆုံး ခွလှေမျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အတှေးတှေ၊ စိတျခံစားမှုတှကေ ကိုယျ့ရဲ့အပွုအမူပျေါ သကျရောကျမှု မရှိသေးခငျ အဲဒီစိတျခံစားခကျြတှဖွေဈလာတယျဆိုတာကို သိနပေါစေ၊ သတိကပျနိုငျပါစေ။ ဒါက ရရှေညျလုပျရမယျ့ အရာတဈခုပါ။ ဆိုလိုတာက ယောငျးရယျ ဒေါသထှကျတယျဆိုရငျ ဘာမှ မပွောမိခငျ၊ ဘာမှမလုပျမိခငျ ဒေါသထှကျတယျ၊ ဒေါသထှကျတယျဆိုတာကို သိလိုကျပါ။ ကွာလာတဲ့အခါမှာ ဒီနညျးလမျးက ဒေါသတှေ၊ ပူလောငျမှုတှေ ငွိမျးစတေယျဆိုတာ သိလာပါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုလုပျဖို့အတှကျ လမျးလြှောကျရငျး၊ ရခြေိုးရငျး၊ စားရငျး စတဲ့နိစ်စဓူဝတာဝနျတှလေုပျဆောငျရငျး ရိုးရိုးလေး သတိထားပွီးအသကျရှူခွငျး (သတိကပျပွီး တရားထိုငျခွငျး)ကနေ စပွီး လကေ့ငျြ့ပါ။ ဒီအလအေ့ကငျြ့က ပုံမှနျဖွဈလာတဲ့အခါ ကိုယျ့ရဲ့သတိရှိမှုက ကိုယျ့ရဲ့စိတျအခွအေနကေို သသေခြောခြာ သိသှားစပွေီး ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ နားလညျမှုကလညျး ပိုနကျနဲလာမှာပါ။ တဈနေ့ ငါးမိနဈ စသဖွငျ့ နညျးနညျးခငျြး စလုပျကွညျ့ပါ။ သကျသောငျ့သကျသာ ပိုဖွဈလာတဲ့အခြိနျမှာ အခြိနျတိုးပွီး လုပျကွညျ့ပါ။
သတိကပျပွီး တရားထိုငျခွငျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ စာအုပျတှေ၊ ဆရာတှေ ရှိကွပမေဲ့ ကိုယျတိုငျက အမွဲတမျး ရိုးရိုးလေးသတိထားပွီး စူးစူးစိုကျစိုကျနဲ့ အသကျရှူမှုကို အလအေ့ကငျြ့လုပျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ကိုယျ့ရဲ့ ခံစားခကျြတိုငျးကို အမှနျတကယျ သိရှိပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နကျနကျနဲနဲ နားလညျလာပွီး အသိအမှတျ ပွုလာနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုပိုမွငျ့လာအောငျ လုပျဆောငျသငျ့တဲ့အခကျြ (၄) ခကျြ
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နားလညျတာက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပုဂ်ဂိုလျရေးအရရော၊ လုပျငနျးသဘောအရပါ တိုးတကျလာဖို့အတှကျ အခွခေံအုတျမွဈ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးတှကေ ကိုယျ့အကွောငျး၊ ကိုယျ့ရဲ့ အားသာခကျြတှနေဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို ပိုပွီး သိရှိလာဖို့အတှကျ အထောကျအကူဖွဈလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
Tagged Cultivate, improvement, know, Knowledge, self awareness, tips
Family Motherhood Tips
Posted on May 4, 2018 July 25, 2018 Author Aye Mon Kyaw
Posted on April 3, 2019 Author Stella